Feb 29, 20202min
Product Research လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ တော်တော်များများသော် Digital Product မှာပါဝင်တဲ့ Stakeholder တွေ မေ့နေကြတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ အချို့လည်းသိလျက်နဲ့ Product Deliverly time အရမ်းကပ်နေလို့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အမျိုးမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပဲပြောပြော ကိုယ့်မှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည်အဝရှိတယ် (သို့မဟုတ်) အခွင့်အရေးရလာရင် Product Research ဆိုတာ လုပ်ကိုလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ဒီ article လေးမှာတော့ ကျွန်တော့်ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမှားတွေနဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Research နည်းလမ်းအချို့ကိုပြောပြသွားပါမယ်။
ဆိုတော့ အလွဲလေးတွေနဲ့ အရင်စလိုက်ရအောင်။ ကျွန်တော် Developer ကနေ Product Management ဘက်ကိုပြောင်းတော့ အချို့အရာတွေကို လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ ကိုယ်က Development environment ကလာတာဆိုတော့ Research အပိုင်းမှာ အားနည်းမှုလေးတွေ ရှိခဲ့တာပေါ့။ ပထမ ၆ လလောက်ကတော့ ကိုယ်လုပ်သမျှက ဟုတ်နေတာပဲ User တွေအတွက်လည်း အကျိုးရှိသလို impact လည်း ကောင်းခဲ့တယ်။ ဒါကလည်း User လိုချင်တာနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေဟာ တိုက်ဆိုင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Roadmap မှာထွေထွေထူးထူး လုပ်စရာသိပ်မရှိတော့ ဟိုစဥ်းစား ဒီစဥ်းစားနဲ့ feature အသစ်တစ်ခု စလုပ်ဖို့ ထပ်လုပ်ဖို့အကြံရတယ်။ ဆိုကြပါစို့ feature Aပေါ့။
ကိုယ်နဲ့အလားတူ Thai တို့ Vietnam တို့က classified e-commerce product တွေမှာလည်း Feature A ဆိုတာရှိနေပြီ။ သုံးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ Product ကိုလည်း တကယ်အကျိုးရှိနေတာကို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော်လည်း Feature A ကြောင့် ရနိုင်တဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ development time တွေ၊ cost တွေ တွက်ချက်ပြီး Developers တွေကို Pitch လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ Developers တွေက မီးစိမ်းပြတာနဲ့ Senior Management တွေကို Pitch လုပ်ပါတယ်။ Stakeholder နှစ်ခုလုံးက သဘောတူတာနဲ့ စပြီး Feature A ကို build လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ platforms (android/ios/website/mobile web) အကုန်လုံးမှာ ready ဖြစ်ဖို့ ၂ လခွဲ ၃ လ လောက် ကြာခဲ့ပါတယ်။
Feature A ကို Launch လုပ်ပြီး ၁ လလောက် analytics tools တွေသုံးပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ၁ ပတ်ပြီး ၁ ပတ်နဲ့ ၁ လပြည့်တော့ သုံးတဲ့သူက မရှိသလောက်ပါပဲ။ ကြားထဲမှာလည်း user awareness မရှိဘူးထင်ပြီးတော့ marketing campaign တွေလည်း လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ Customer Support Department နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ကိုယ့် customer တွေနဲ့ market ထဲက user တွေကို မေးမြန်းကြည့်တော့မှ သူတို့ကဒီ Feature အတွက် ready ဖြစ်မနေသေးဘူး။ တစ်မျိုးပြောရရင် ကျွန်တော်တို့ ၃လလောက်အချိန်ယူပြီး လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီ Feature A က ကိုယ့် User တွေအတွက် အသုံးမဝင်တဲ့ဟာဖြစ်နေတာပေါ့။ဆိုတော့ ကျွန်တော် bad decision အကြီးကြီးတစ်ခု လုပ်လိုက်မိပြီး ရလာတဲ့ အကျိုးဆက်ကလည်း အချိန်လည်းကုန်၊ ငွေလည်းကုန်။ ဒါတွေအားလုံးကတော့ research ကောင်းကောင်းမလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပြီး မှတ်ချက်ချခဲ့တယ်။
Product Research ဆိုတာဘာလဲ?
Research ဆိုတာ ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အကျိုးအမြတ်တွေ၊ သက်သေတွေချပြနေရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့ Product Research ဆိုတာကတော့
ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်ယူရတဲ့ ပုံစံမျိုးမဖြစ်ရဘူး။
Scientists တွေ Experts တွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ Researchers တွေကလုပ်မှရတဲ့ပုံစံမျိုး မဖြစ်ရဘူး။
Product Team က ဘယ်သူမဆို ဝင်လုပ်နိုင်ရမယ်။
လိုအပ်ပါက rules လေးချမှတ်ပြီး Research mindset ကိုတည်ဆောက်ပါ။
Product Research နည်းလမ်းများ။
ကျွန်တော်လုပ်လေ့ရှိတဲ့ Product Research ပုံစံကိုပြောပြသွားပါမယ်။ ဒီ Research တွေဟာ ကျွန်တော်အရင်က Youtube Video တစ်ခုကနေတွေ့ပြီး လိုက်သုံးကြည့်ရင်း အဆင်ပြေတာနဲ့ အမြဲသုံးဖြစ်သွားတာပါ။
ဒီ Research ကို Quantitative နဲ့ လုပ်လေ့ရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက User အယောက် ၃၀ မှာ ၁၀ ယောက်က ဒီအခက်အခဲကြုံနေတယ်။ ဒီ Feature လိုနေတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ Data ကို survey တွေ Polling Campaign တွေလုပ်ပြီးတော့လည်း လေ့လာလို့ရသလို Customer Support တို့ Digital Marketing လို့မျိုး ကိုယ့် Users တွေနဲ့ အထိအတွေ့များတဲ့ team တွေမှာလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။
Quantitative Method နဲ့ပဲ လုပ်ပါတယ်။ ဘယ်လို company တွေမှာဒီ Feature ရှိတယ် (သို့) လုပ်နေတယ်၊ လူဘယ်နှစ်ယောက်က လက်ရှိမှာသုံးနေတယ် (သို့) လိုအပ်နေတယ်၊ Market Size ကရော ဘယ်လောက်ရှိတယ် စသဖြင့်ပေါ့။
3.	Product Analysis
Quantitative Method သုံးပြီးတော့ User ရဲ့ကိုယ့် Product အသုံးပြုပုံ Pattern တွေကို Research လုပ်တာပါ။ ဘယ် page တွေကို အများဆုံးသွားလဲ။ တစ်နေ့ဘယ်နှစ်ကြိမ် Login ဝင်လဲ? အချိန်ဘယ်လောက်ကြာကြာ အသုံးပြုလဲ? စသဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ Google analytics (သို့) Firebase (သို့) တစ်ခြား ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ tools တွေသုံးပြီးတော့ အလွယ်တကူ Research လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဒီသုံးခုလုံးပေါင်းထားတာကို Product Research လို့ခေါ်ပါတယ်။ User ပဲ Research လုပ်မယ်၊ Market ပဲ Research လုပ်မယ်ဆိုပြီး တစ်ခုတည်းကွက်ပြီးလည်း လုပ်လို့မရပါဘူး။ အပေါ်က case ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်က Market Research တစ်ခုပဲ လုပ်ခဲ့တယ်။ User Research မလုပ်ခဲ့တော့ မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ User လိုအပ်နေတဲ့ဟာ မဟုတ်တဲ့အတွက် သုံးတဲ့သူမရှိတဲ့ Feature ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒီမှာ တစ်ချက်ပြောစရာရှိတာက ဘာလို့ Quantitative ပဲသုံးနေတာလဲ? Qualitative Method ရောမသုံးဘူးလား? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ Don't နဲ့ Do မှာပြောထားသလို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ data ကိုရဖို့ Qualitative Method သုံးမှရမယ်ဆိုလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ အောက်ကပုံကို တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Research Plan for Quantitative and Qualitative Methods
ပုံကိုကြည့်မယ်ဆို အပိုင်းက ၄ ပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ပထမအပိုင်းက ​Internal User with Quantitative Method. Internal User ဆိုတာ ကိုယ် ​Product မှာ လက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ User ကိုပြောတာပါ။ ဒီ User တွေကို Quantitative Method နဲ့ ကျွန်တော်တို့ google analytics လို analytics tools တွေသုံးပြီး ဘယ် features တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်/စိတ်မဝင်စားဘူး။ ဘယ် features ရဲ့ ဘယ်အစိတ်အပိုင်းက User တွေအတွက် အသုံးပိုဝင်တယ်/ အသုံးများတယ်။ ပြီးတော့ User ရဲ့ behaviors တွေ အသက်အရွယ်၊ ကျား/မ၊ Location အကုန် Research လုပ်လို့ရပါတယ်။
External User with Qualitative Method ဆိုတာက User တွေက ကိုယ့် Product ​ကိုအသုံးမပြုတဲ့ User တွေပေါ့။ ဥပမာ.. competitors product ရဲ့ users တွေ၊ ဒီ industry ကို မသိသေးတဲ့ users တွေ စသဖြင့်ပေါ့။ Customer Surveys ပုံစံမျိုးနဲ့ data gathering လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Internal and External Users with Qualitative Method ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ Customer Interview တွေ Industry analysis တွေ Industry analysis နဲ့ ​Trend reports တွေပြုလုပ်ပြီးတော့ Research လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ Research လုပ်လုပ် အထက်ကပြောပြခဲ့တဲ့ Research တွေဖြစ်တဲ့ User Research, Market Research နဲ့ Product analysis ၃ ခုကိုမေ့ထားလို့မရပါဘူး။
Product ​Research ကို data လိုအပ်တော့မှ လုပ်တာထက် ​​Eco system လေးလုပ်ထားခြင်းက ​Product managers တွေ အများကြီးသက်သာစေပါတယ်။ တစ်ခြား Product Research အမျိုးအစားတွေလည်း အများကြီးရှိဦးမှာပါ။ အထက်ကရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ ကျွန်တော် Research လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ပုံစံလေးတွေကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ အချိန်ရခဲ့ရင်လည်း Product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content လေးတွေ ရေးသွားပါဦးမယ်။ အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။